बिरालो मालिक र कुकुर प्रेमीहरूले बीच विवाद पुरातन चोटि शायद छन्। एक पाल्तु जनावर राम्रो के सुरु गर्न, प्रत्येक निर्णय आफ्नै। तर यो तपाईं आज्ञाकारी र राम्रो-mannered पाल्तु जनावर हुन चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि चयन कि कुकुर खडा विचार लायक छ। बिरालो छैन घर प्रशिक्षित गर्न सकिन्छ। र कसरी बिरालो ल्याउन? बाटो बिराएका र जानाजानी जगतले कहिल्यै विश्वासीपूर्वक आँखा मा हेर्न र आदेशहरू पालन गरिनेछ। यी furry धन शिक्षित बच्चा हुर्काउन गर्न akin छ। मालिक बिरालो व्यक्ति आफ्नो पाल्तु जनावर को भरोसा जीत र उसलाई साधारण भाषा फेला पार्न हुनेछ।
मालिक हेरविचार देखाउने यदि बिरालो, शायद सुनेका गरिनेछ। यो परिवारको वास्तविक सदस्य बन्न सक्छ, जो को समस्या एक व्यक्ति भन्दा कुनै बढि छ। Weasel weasel बिरालो प्रतिक्रिया हुनेछ। मानिसहरू बिरालो होस्ट छनोट कि र बस उसलाई जस्तै बन्न छैन, तर आफ्नो भाग्य दोहोरिन सक्छ भन्ने विश्वास। महसुस र मानव स्वास्थ्य कम गर्न पशु को क्षमता वैज्ञानिकहरू द्वारा अध्ययन र प्रयोग द्वारा साबित भएको छ।
घर मा पशु लिएर अघि, तपाईं एक बिल्ली को बच्चा को लागि एक शौचालय कहाँ व्यवस्था गर्न विचार गर्नुपर्छ। यो मालिक सामना गर्न भनेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा मध्ये एक छ। बिरालोहरु - धेरै स्वच्छ प्राणीहरू। तसर्थ, बर्तन खाने को लागि, सुत्ने र शौचालय कागज ट्रे सिद्ध अवस्थामा राख्नुपर्छ। अन्यथा, समस्या पहिलो दिन देखि सुरु हुनेछ र गलत ठाउँमा बिरालो बकवास wean, वा असम्भव हुनेछ तालिका देखि खाना ले।
कहिलेकाहीं राम्रो तरिकाले गऱ्यौ गर्ने pet, अचानक माथि र वर्तमान मालिक अप्रिय उपहार गर्न कार्य गर्न थाल्छ। कुनै स्पष्ट कारण लागि बिरालो खाट shits। यस मामला मा के गर्न? यो यस्तो व्यवहार को कारण बुझ्न आवश्यक छ।
किन ओछ्यानमा एक बिरालो बकवास गर्छ? बिरालो गरेको राय मा, व्यवहार लागि कारण धेरै राम्रो हो।
उमेर र स्वास्थ्य स्थिति।
फोहोर शौचालय ट्रे।
सबैभन्दा सशक्त कारण खाट मा एक बिरालो बकवास, किन उनको उमेर हुन सक्छ। पाल्तु जनावर र पुरानो मालिक को स्वास्थ्य स्थिति समस्या धेरै सिर्जना गर्छ। एउटै घरमा सबै आफ्नो जीवन बस्ने र मास्टर बेड मा सुत्न accustomed छन् होने, बिरामी बिरालो बस शौचालय प्राप्त गर्न समय नहुन सक्छ। कमजोरी र असंयम, तर पाल्तु जनावर एक misdemeanor दोषी को प्रकृति हानि। लागि यो एक हात उठाउनु छैन उसलाई सजाय।
यो होम मा छैन अक्सर छन् भने समस्या जोगिन गाह्रो छ। तपाईं नजिक शौचालय एक ओछ्यान पुरानो बिरालो व्यवस्था गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। र पाहुना गरेको बेड गर्न पहुँच बन्द ढोका सीमित।
एक बिरालो कसरी जुटाउने?
शिक्षा पाल्तु जनावर घरमा आफ्नो आगमन को पहिलो दिन देखि सम्बोधन गर्नुपर्छ। एक बच्चा यसको आफ्नै सौन्दर्य देखि जन्मिएको छ भने, त्यो आफ्नो बच्चा सबै चाल सिकाउन हुनेछ सम्भावना छ। यस बिल्ली को बच्चा घरमा ल्याए गरिएको छ भने, आफ्नो पालनपोषण सम्पूर्ण मालिकहरूको काँध मा खण्डमा।
को caudate पाल्तु जनावर गएर तिनलाई खान र आफूलाई जहाँ राहत गर्नेछ ठाउँमा देखाउनुपर्छ पहिलो मिनेट देखि। को ट्रे सधैं उपलब्ध छ राख्न। यसलाई जो तिनीहरूले किट्टी फोहर फाल्न लागि फिलर प्रयोग अघिल्लो मालिक, अनुरोध गर्नुपर्छ। जो बिरालो ओछ्यानमा ट्रेमा एउटा अखबार भइरहेको प्रयोग सबै भन्दा राम्रो फिलर जान इन्कार गर्न सक्छ। त्यसपछि उहाँले पुस्तकहरू र समाचार पत्र, तिनीहरू जहाँ कुनै कुरा मा बकवास गर्न सुरु हुन्छ। पहिलो पटक एक बिल्ली को बच्चा को व्यवहार निगरानी गर्न निश्चित हुन। सबै सर्तहरू पूरा गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं स्वतन्त्र खाद्य एक कप पाउन प्रयोग बेबी, र शौचालय लागि ट्रे एक हप्ता भन्दा बढी आवश्यक छैन।
जबकि अप्रिय आश्चर्य अझै पनि हुनेछ। बिरालोहरु रंग मा उत्खनन गर्न प्रेम। कहिलेकाहीं बोट बर्तन मा शौचालय व्यवस्था, वा तल्ला मा बर्तन बन्द लिन। तर सबैभन्दा अप्रिय बिरालो खाट shits गर्दा। यस मामला मा के गर्न? त्यहाँ व्यक्तिगत निर्णय हुनेछ।
बिरालो किनभने पट्टाइ वा quarrels र भ्रष्टाचार को बेड मा "शौचालय"
किन ओछ्यानमा एक बिरालो बकवास गर्छ? मास्टर बेड पाल्तु जनावर स्थानको लागि छ सबै मूल embodies। पनि विशुद्ध को राखे ओछ्यानमा महसुस गर्न प्रयोग बिरालो जब व्यक्ति सञ्चार odors राख्छ। त्यसैले, आफ्नो dissatisfaction त्यो कहाँ मालिक पहिलो नोटिस गर्नेछन् देखाउन खोज्छ।
मालिक लामो समय को लागि घर छोड्दा को स्थिति, पशु नरमाइलो लाग्यो प्राप्त गर्न सुरु भन्ने तथ्यलाई नेतृत्व। विशेष गरी यदि पाल्तु जनावर एक्लै घरमा रहन गर्न प्रयोग गरिएको छ। आफ्नो अप्रसन्न हुनुभएको देखाउन, बिरालो यो स्थान सबैभन्दा महंगा मानिन्छ किनभने, खाट मालिक मा बकवास गर्न सक्नुहुन्छ। आखिर, खाट बाहिर अधिकांश समय, मालिक घरमा छैन भने लगे छ।
सजाय बिल्कुल कुनै प्रभाव दिन सक्दैन। तर देखाउन यो अप्रिय छ कसरी र पाहुना व्यवहार मनपर्ने विरक्तलाग्दो, यो लायक छ। बिरालोहरु व्यक्ति को मूड धेरै संवेदनशील छन्।
पाल्तु जनावर को मालिक बीच घरमा चियोचर्चा नकारात्मक प्रतिक्रिया हुन सक्छ। गरिब पशु व्यक्तिगत अनुभव रूपमा आफ्नो पाल्तु जनावर को मूड मानते। हामी बिरालोहरु को व्यवहार हेर्न भने, घर काल हुँदा, हामी त्यो मानिस जस्तै चिन्तित छ कि देख्न सक्छौं। को offender छ जो, आफ्नो दृश्य मा पाहुना देखि चयन, यो राम्रो जूता मा बदला लिन, बकवास लाग्न र ओछ्यानमा मा राख्न सक्छ।
यो एक misdemeanor लागि बिरालो गाली गर्नुपर्छ, र यो एउटा अप्रिय आश्चर्य अनिवार्य छ प्रदान गर्नेछ। यो जनावर को Vindictiveness मानव बोध परे छ। घरेलु बिरालोहरु आफूलाई घर को मुख्य बासिन्दाहरू विचार गर्नुहोस्। तिनीहरूले केही आवश्यक छ भने, त्यसपछि तिनीहरूले कुनै पनि हालतमा हासिल गर्नेछ। मालिक यो व्यवहार संग राख्नु पर्छ र बस त्यो के सोध्छन् दिनुहोस्। यो एक विशेष रोप्न त गाह्रो छ , बिरालोहरु लागि घाँस त्यो फूल बर्तन स्पर्श थिएन त्यसैले? गाह्रो छैन। तर पशु ध्यान मूल्यांकन र खराब कामहरू छैन।
खाट बाट बिरालो टाढा तर्साउन गर्न, तपाईंलाई एउटा विशेष उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। गलत ठाउँमा बिरालो बकवास "Pillkan" र मदत गर्न सक्छ Wean "ट्याग बिरालो।" पशु चिकित्सकहरु यस्तो कागति, सुन्तला रूपमा प्राकृतिक repellents प्रयोग गर्न सल्लाह गर्दा।
को ट्रे को उचित हेरविचार
संसारमा घरेलू बिरालोहरु भन्दा केही बढी शुद्ध जनावरहरू छन्। एक खाट मा एक बिरालो बकवास किन ट्रे को एक राज्य हुन सक्छ सबैभन्दा लोकप्रिय कारणहरू। यो स्थानको लागि मालिकको अप्रिय आश्चर्य बच्न ध्यान हेर्न छन्। भर्न र ट्रे आसपास क्षेत्र धुन गर्न समय परिवर्तन गर्न निश्चित हुनुहोस्। शौचालय सफा गर्न ब्लीच प्रयोग नगर्नुहोस्। बिरालोहरु Smells धेरै संवेदनशील छन्। बलियो क्लोरीन "खुशबू" गाह्रो एक नामित ठाउँमा defecate बनाउँदै, जनावर रीस उठाउनु सक्छ।
आफ्नो पाल्तु जनावर स्वास्थ्य ध्यान
जनावर को समस्याग्रस्त व्यवहार लागि महत्त्वपूर्ण कारण आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति हुन सक्छ। बिरालोहरु संवेदनशील पाचन पर्चा छ।
दौरा शामिल विकार किनभने बासी खाना, परजीवी र fleas को सम्भव छ। समयमा उपाय जनावरहरूलाई सञ्चार समस्याहरू नेगेट थियो।
जंगली प्रतिनिधिको बिरालो परिवारको। मर्मतका, पालनपोषण, विशेष गरी
बिरालोहरु को सामाग्री को लागि फैशन, जंगली feline गर्न को विस्तार जो सानो बिरालोहरु छन् उप को एक। जनावरको यस्तो गर्न चाहनेहरूको ती ध्यान विचार गर्नुपर्छ। सानो बिरालो, घर मा केही तरिकामा हुनत यस्तै, तर यी जङ्गली जनावर हो। आफ्नो आकार कुनै पनि समस्या बिना पशु को domestication सुझाव। र यो बग प्रेमीहरूको मनोरम सुंदरियों छ। जीवन शैली, आहार, र यति घरेलू र जंगली बिरालो बीच फरक मा प्रभावित एक व्यक्ति संग सम्पर्क मा फरक, हामी यो पूर्ण बिभिन्न पशु हो भनेर भन्न सकिन्छ।
जंगली को पिंजरे वा aviary मा छ समावेश गर्दछ। यो तपाईंलाई प्ले हुनेछ छैन र देखा पर्न इच्छा गर्दा PAT छैन। पनि taming एक जंगली बिरालो को यो nakinetsya कि छैन र सोचो छैन वा मालिक क्षति ग्यारेन्टी छैन। परिवार जवान छोराछोरीलाई छ भने यो यस्तो पाल्तु जनावर राख्न विशेष गरी खतरनाक छ।
Bullmastiff: नस्ल, समीक्षा, फोटो को विशेषता
1.5 महिना को बिल्ली को बच्चा: सही खुवाउन के?
को बाश्कीर नस्ल को घोडाहरू: विवरण र फोटो
छोराछोरीको जूता Tiflani - आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्य ग्यारेन्टी
एक दिन चाँडो र प्रभावकारी ढंगमा वजन कसरी गुमाउन सिक्नुहोस्
को हिउँदमा अड्डा लागि balancer Catchability
खाडी तारा होटल2* (दुबई): कोठा, होटल सुविधाहरु को विवरण, समीक्षा